THE LOST BOOK | काव्यालय
by प्रवीण November 30, 2019
| Return of ‘Lost’ |
भएका कुराहरू हराइरहन्छन् मेरा । खै कुन्नि किन हो, केही चिजहरू/कुराहरू, कोही मान्छेहरू मसँग धेरै समय बिताउन चाहन्नन् । गोजीबाट इयरफोन लगायत हराउँछन् । वालेट खस्छ । कलमपनि कतै झरिसकेको हुन्छ । ढोकाको चाँबी कहिलेकाहीँ ढोकासम्म आइपुग्दैन । प्रेमिकाहरू पनि समय सँगसँगै गुमनाम भएका छन् । मबाट हराउने मोह बढी नै छ यी सामानहरूलाई, ती मनहरूलाई !
मलाई पनि गुनासो त छैन । म पनि खासै कोही/केहीसँग जोडिएर बसिरहन सक्दिनँ । बद्लिरहने मेरो आदत छ र म आफ्नो आदतको खुब ठूलो अनुयायी हुँ । अरू कसैको लागि बद्लिने मान्छे आफ्नो मान/व्यक्तित्वको दुश्मनै हो भन्छु म । प्रेमकै कुरा गर्ने हो भने पनि, प्रेम अघि मान्छे जस्तो हुन्छ, प्रेममा परेपछि किन त्यस्तै रहँदैन ? प्रेमले कसैको लक्षण/विशेषता नै बदल्न सक्ने साहस राख्छ । यो मैले बुझेको छु । यसको मतलब यो होइन कि, परिवर्तन हुनु हुँदैन । अवश्य, परिवर्तन जरुरी छ तर आफ्नो लागि । अरु कसैको सानो खुशी वा कारणको लागि आफू बदलिनु, आफैलाई दु:ख दिने कुरा सिवाय केही होइन । मलाई कम्तिमा यस्तै लाग्छ । कोही भन्लान्, यो एउटा स्वार्थ हो । अरे, स्वार्थ कहाँ छैन ? यहाँ स्वार्थी को छैन ? ती दर्शनका ठूला ठूला भाषणहरूमा मात्र प्रयोग हुन्छ ‘निस्वार्थ’ भन्ने शब्द । यहाँ हरकोही बाँच्ने स्वार्थमा मरिरहेको छ ।
अलिक बढी नै सोचेँ कि ? म आफ्नो टाउको झड्कार्छु । इलेक्ट्रिक मगमा पानी तातिसकेको छ । म कपमा अलिकति कफि हाल्छु र २ चम्चा चिनी थप्छु । अनि त्यहीँ उम्लिँदै गरेको तातो पानी थोरै कपमा खन्याउँछु र त्यसलाई चम्चाले फिट्न थाल्छु । पानीलाई कपमा हाल्छु र कप बोकेर म तल गेटमा पुग्छु । यताउता हेर्छु । पत्रीका आइपुगेकै छैन । म फेरि माथि उक्लिन्छु । छतमा जान्छु र उदाउँदै गरेको घाम र उठ्दै गरेको काठमाडौँलाई नियाल्छु ।
यो काठमाडौंको आङ तनाई मलाई एक सुन्दर युवतीको यौवना जस्तै लाग्छ । कति कामुक छ, यो सहर, यो बिहानी । काठमाडौँमा धुँवा/धुलो मात्र छैन । यो त यसै बदनाम छ, जामले । काठमाडौँले थोडी गरेको हो र जाम ? धन्न, कति मान्छेहरूलाई थेगेको छ यसले । मलाई सास फेर्न दिएको छ, तपाईंलाई बाँच्न सिकाएको छ । यो काठमाडौँ हो, यसले सबैलाई प्रेम गर्छ ।
कफिको अन्तिम प्याक सुर्पाउँछु । घामले मेरो निधारलाई छोइसकेको छ । केही दिन यता काठमाडौँमा जाडो बढिरहेको छ । शरिर न्यानो बनायो घामले । ‘अब त पत्रिका आइपुग्यो होला ?’, म सोच्छु । कफिको कपलाई त्यहीँ छतमै छोडेर, म तल गेटमा पुग्छु ।
शनिबारझैँ अल्छि भएर ‘नयाँ पत्रिका’ लडिरहेछ गेट अघि । त्यसकै छेउमा एउटा रातो कपडाको झोला पनि छ । पत्रिका उठाउँछु । काखीमा च्याप्छु ।झोला उठाउँछु र झोलाभित्र चियाउँछु । त्यहाँ एउटा किताब छ । निकाल्छु त्यो किताब । नाम पढ्छु, मार्क ड्यानियलेस्कीको, “हाउस अफ लिभ्स” । मलाई आश्चर्य लाग्छ । अनौठो लाग्छ । अरे, यो किताब त…… मलाई हप्तादिन अघि एउटा साथीले अमेरिकाबाट ल्याइदिएको थियो । र जुन मेरो कोठासम्म आइपुगेको थिएन । बाटोमै हराएको थियो ?
| Lost of ‘Lost’ |
आइतबार । ‘ग्लुमी सन्डे’। आइतबारलाई किन निराश बार भनिएको होला मलाई थाहा छैन । किन त्यति निराश गीत लेखियो मेरो प्रिय बारलाई राखेर । अनि किन त्यो गीत सुनेर त्यत्रा मान्छेले आत्महत्या गरे ? एक गीत जो धेरैको मृत्युको कारण बन्यो । सम्झिँदा पनि अनौठो लाग्छ । सोच्दा पनि लाग्छ, ‘खै कसरी हुन्छ यस्तो ?’ मलाई आइतबार मन पर्छ । शनिबार अल्छि लाग्दो भए पनि आइतबार फेरि अर्को उमङ्ग बोकेर आउँछ । मलाई आइतबार मन पर्नुको कारणहरू धेरै छन् । एउटा कारण एकछिन पछि प्रकट हुन्छ ।
मोबाइलमा ‘बर्तिका एम राई’ बजिरहेकी छिन्, ‘सम्झनामा म सधैँ हाँसिरहूँ, सम्झनामा तिमी सधैँ हाँसिरह…’। यो मान्छेको स्वरको म दिवाना हुँ । उनका शब्दहरूको प्रेमी हुँ । कुनै पनि उनको नयाँ गीत आएपछि, म ३ दिन मै त्यसलाई पुरानो बनाइदिन्छु । लगातार सुनिरहन्छु ।
भित्तामा सिरानीलाई अडेस लगाएर, म ‘चाल्स बुकोस्की’का कविताहरू पढिरहेको छु । बुढाको लेखाइ खुब मन परिरहेछ । एक दुईजना साथीहरू यो बुढाका फ्यान छन् । तिनले फेसबुक स्टोरीमा राखेका लाइनहरू देखेर नै यिनलाई पढ्ने भुत ममा जागेको हो । लेखन शैली फरक छ । कुनै दिन उनको उपन्यास नै पढ्ने योजना बनाइसकेको छ मनले-
“अ हो !”
एक्लो हुनुभन्दा पर पनि
निकै दु:खहरू छन्
तर यो महशुस हुन
अनि जब महशुस हुन्छ
तब धेरै ढिला भइसक्छ
र ढिलो हुनुभन्दा नराम्रो कुरा यहाँ अरु केही छैन !
~ चाल्स बुकोस्की
फोनको घन्टी बज्छ । एउटा भुतिया हाँसो । कहिलेकाहीँ म आफ्नै मोबाइलको रिङटोनले तर्सिन्छु । अघि भन्दै थिए नि म, आइतबार मन पर्नुको कारण । एउटा कारण प्रकट भयो, मोबाइलको स्क्रिनमा देख्छु- ‘प्रिय प्रेत आत्मा’ । म फोन उठाउँछु ।
” कता हो ?”, उताबाट आवाज आउँछ ।
” म रुम मै छु !”, म भन्छु ।
” ल यता अड्डा आऊ, कफी पिउन !”
” ल आइहालेँ..!”, फोन राख्छु
म खाटबाट उठ्छु । मोबाइलमा ‘राहत फते अलि खान’ बजाउँछु र टुथब्रस र पेस्ट लिएर म वासरुम छिर्छु,
‘ …. मोहबत भी जरुरी थि…बिछड्ना भी जरुरी था…..’
अचेल खुब अल्छि भएको छु म । ८ बजेभन्दा अघि उठ्न गाह्रो पर्छ मलाई ।
” के खाने ?”, हात मिलाएर बस्ने साथै उसले सोध्यो ।
” त्यही कालो कफी !”, मैले मुस्कुराउँदै भनेँ ।
वेटर दुईवटा ब्ल्याक कफिको अर्डर लिएर गयो । हाम्रो पनि ब्ल्याक गफहरू सुरु भयो । किताब कुन कुन पढियो ? फिल्म कतिवटा हेरियो ? कति लेखियो ?
“बर्तिकाको नयाँ गीत आएछ, सुन्नुभयो ?”, मैले सोधेँ ।
उसले सुनेकै रहेनछ ।
“छैन यार “, भन्यो ।
ऊ अचेल पढ्नमा व्यस्त छ । कति किताब पढ्छ । अनि फेरि कति चाँडो । कहिलेकाहीँ डाहा पनि लाग्छ मलाई । म अति नै ढिलो किताब पढ्न थालेको छु । ३ दिन अघि मुराकामीको ‘किलिङ कमेन्डेटोर’ सुरु गरेको अझै सकिएको छैन ।
” अनि कुन किताब पढ्यौ ?”
” फाइब पिपुल यु मिट इन ह्याभेन “, जो उसैले मलाई पढ्न सुझाव गरेको थियो ।
“कस्तो लाग्यो त ?”
” गजबको छ ।”
साच्चै नै त्यो किताब राम्रो छ । पढुञ्जेल र पढिसकेपछि पनि आनन्द भइरह्यो । एउटा मान्छे मर्छ, र उसले स्वर्गमा ५ जना मान्छेलाई भेटाउँछ, जो ऊसँग कतै न कतैबाट सम्बन्धित हुन्छन् । एउटा जिन्दगीलाई, अर्काको जिन्दगीको सानो कुराले कति असर गर्छ भन्ने कुरा किताबमा देखाइएको छ ।
” तपाईले के पढ्नु भयो ?”
– ” म टन्नै पढिरहेछु यार अचेल, पढ्ने मुड चलिरहेको छ, भर्खरै ‘ द इन्स्टिच्युट’ सकियो ।”
‘ स्टेफन किङ’, हामी दुबैलाई खुब मन पर्छन् ।
” आज कता जाने हो ?”
– ” त्यहाँ पाटन सम्म पुगौं न, एउटा साथीले किताब ल्याइदिएको छु भन्थ्यो !”
” कुन किताब ?”
– ” ‘हाउस अफ लिभ्स’, खुब पढ्न मन लागिरहेको छ ।”
” ओहो, गजब । मैले नि खुब सुनेको छु त्यो किताबको बारे ।”
बाटामा त्यही फिल्मको कुरा भयो । साउथ इण्डियामा पनि धेरै राम्रा आर्टिस्टिक फिल्महरू बन्न थालेछन् भनेर ऊ भनिरहेको छ । मैले नि पछिल्लो समय हेरेका फिल्महरूमा त्यो महशुस गरिरहेको छु । तर मलाई भने, फिल्म भन्दा पनि त्यो किताब मेरो हातमा कतिबेला पर्छ र छामौँ भइरहेको छ । उसले ‘पहिलो पटक प्रेमिकालाई भेट्न गए जस्तो के हतार गरेको’ भन्दै जिस्काइरहेको छ । हुन पनि मलाई त्यस्तै भइरहेको छ । भेट्ने तड्पाई, छुने आतुरता !
हामी हिँडेरै पाटन पुग्यौँ ।
‘पाटनका तान्त्रिक गल्लीहरू नगरकोटीका किताबका फोक्सो हुन् !’, म सम्झिन्छु र फिस्स हाँस्छु ।
” किन हाँसेको ?” , ऊ सोध्छ ।
” नगरकोटीलाई सम्झेँ !”, म मुस्कुराउँदै भन्छु ।
” उसको त अड्डै हुन् नि त यी गल्लीहरू !”, ऊ पनि मुस्कुराउँछ ।
‘ द ब्लु लाइटर’ क्याफेको एक कुनामा , स्कुलसँगै पढेको साथी, कुनै विदेशी पर्यटक जस्तो भएर बसिरहेको रहेछ । हामी पनि त्यहीँ कुनामा पुग्यौँ । एकछिन केही आत्मीयता र केही परिचय साटासाट भयो ।
” पुरै विदेशी भइछस् ?”
ऊ मुस्कुरायो मात्र । केही प्रतिक्रिया दिएन । भर्खरै खाना खाएर हिँडेको हुनाले हामीले कफि मात्र मगायौँ । बेलुकै घर फर्कँदै रहेछ ऊ । त्यसैले हतारमा मलाई भेट्न र किताब बुझाउन मात्र आएको भन्यो । ‘हाउस अफ लिभ्स’ को कभर छाम्दै मैले भनेँ-
” यो बुक नल्याई आएको भए तँ मर्थिस् !” मैले मुस्कानका साथ धम्की पनि दिएँ । ”
“४/५ वटा बुकस्टोर धाउनु पर्यो यो बुक भेट्न उता पनि !” , उसले पनि मुस्काउँदै भन्यो ।
“यता त झन् पाउँदै पाउँदैन !” , मैले किताबलाई टेबलमा राख्दै भनेँ ।
अमेरिकाको मौसमको कुरा भयो । ‘यता जाडो बढेको रहेछ’ भन्दै उसले आफ्नो हात ततायो । केही किताबका, केही देशका , राजनितीका, साहित्यका कुरा गर्दै हामीले कफी सकायौँ । ऊ, ‘अब फर्किनु पर्छ, मलाई ढिलो हुन्छ’ भन्दै उठ्यो । म तिर्छु भन्दाभन्दै पनि बिल उसले आफै तिर्यो । र ‘घरतिर सबै केटाहरूलाई सम्झेको छ है, भन्दे’ भन्दै, हामी एकअर्कासँग छुटियौँ ।
“स्कुल पढ्दाको साथी ?”, उसले सोध्यो ।
‍- “हो !”, मैले मुस्कुराउँदै भनेँ , “केटाहरूले देश/विदेश खाइसके, हामी जहाँको त्यहीँ !”
“बिस्तारै हुन्छ, हतार गर्नु हुन्न !”
– “हो त्यो पनि, अब कता जाने त ?”
“ अब यो गल्लीले जता लग्छ त्यतै !”
– “ अँ अब अहिले रुम फर्किने कुरो पनि भएन ।”
एकछिन ‘पाटन दरबार स्क्वायर’ तिर बरालियौँ । ‘शङ्खमुल घाट’मा गएर एकछिन भड्कियौँ पनि । यो घाटलाई पार्क बनाएको कति नसुहाएको । उसले त्यहीँ घाटमा बसेर, आफ्नो एउटा घाट जस्तै शान्त शेर सुनायो-
“कहिलेकाहीँ घाट पनि सुनसान हुँदोरहेछ
हेर, मृत्यु पनि त कसैसँग डराउँदो रहेछ !”
घडी हेरेँ, ४ बजिसकेको रहेछ । भोक पनि लागिरहेको छ । हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ र अलिक पर एउटा क्याफेभित्र छिर्यौँ । ‘पोर्क मःम’ खाने प्लान हाम्रो धेरै पहिला देखि बनिरहेको थियो तर जुरेको थिएन । त्यो क्याफेमा रहेछ । आज बल्ल जुर्यो । हामीले दुई प्लेट मगायौँ र खायौँ ।
“मिठो रहेछ !”, उसले भन्यो ।
मःमले गर्दा, अघिदेखि पिसाब च्यापिरहेको छ, भन्ने कुरा पनि भुलेछु । काउन्टरको दाइलाई ‘वासरुम कता छ’, भनेर सोध्छु र सोझै त्यतैतिर लाग्छु । फर्किएर आउँछु र टेबलबाट न्याप्किन टिपेर मुख पुछ्छु । एक्कासी झल्याँस सम्झन्छु, टेबलमा त किताब नै छैन । म ऊतिर हेर्छु । ऊ काउन्टरमा बिल तिर्दै रहेछ । न उसले झोला बोकेको छ । न उसको हातमा त्यो किताब नै छ । म सोझै ऊ भएको ठाउँमा पुग्छु र भन्छु-
“ किताब नै छैन त यार ?”, मेरो अनुहार मलिन हुन्छ ।
“ के भन्छ, म यता बिल तिर्न आउँदा त त्यहीँ टेबलमै थियो त ?”, ऊ पनि आश्चर्यमा पर्छ ।
हामी दुबैजना अघि हामी बसेको टेबलतिर पुग्छौँ । यता , उता, टेबल तल, माथि, सबैतिर आफ्नो आँखा पुर्याउछौँ । तर किताब कतै हुँदैन । एकचोटि क्योफे वरिपरि हेर्छु म, सबै आआफ्नै धुनमा गफ गरिरहेछन् , खाजा खाइरहेछन् । तर त्यो किताब, यो क्याफेको कुनै कुनामा पनि छैन ।
“यहाँबाट कसैले एउटा किताब लिएर गएको देख्नुभयो ?”, उसले काउन्टरको दाइलाई सोध्यो ।
“ खै यार भाइ, याद नै भएन ।”
हामी त्यहाँबाट निस्कियौँ । निस्किने बेला पनि मैले पछाडि फर्केर त्यही टेबललाई हेरेँ । कस्तो नरमाइलो लाग्यो । आफ्नै शरिरको एक अङ्ग नै त्यहीँ छुटेजस्तो लाग्यो ।
“कतै त्यो टेबलमा ब्ल्याल्कहोल त थिएन, त्यो किताब कुनै अर्कै संसारमा पुगिसक्यो कि ?”, उसले हल्का मुस्कानका साथ भन्यो ।
जवाफमा, म पनि मुस्कुराएँ मात्र, केही भनिनँ । भन्ने पनि के ? न कसैले लगेको थाहा भयो, न कसरी हरायो भन्ने कुराको ज्ञान नै भयो? ठिकै छ, लगेको भए कोही पढ्नेले नै लगेको होला र यदि उसले भनेजस्तै त्यो किताब ‘ब्ल्याल्कहोल’बाटै गायब भएको भए, कुनै अर्कै दुनियाँमा कसैको हातमा मस्त सजिएको होला । आफै मनलाई सम्झाउने कोशिस गरेँ तर पनि खल्लो भइरह्यो । कुनै लामो प्रेम सम्बन्ध पछि, बिछोड भएको प्रेमी जस्तै आफूलाई पाएँ । कतै पोलिरहेको महशुस गरेँ ।
| Letter of ‘Lost’ |
पत्रिका र किताब दुबैलाई लिएर म माथि छतमा उक्लिएँ । पत्रिकालाई टेबलमै राखेर, किताबलाई पल्टाएँ । किताब नयाँ नै छ । दोब्रिएको पनि छैन, दाग पनि कतै देखिनँ । तर एकचोटि कसैले पढिसकेको हो भन्ने चै थाहा पाएँ । किताबको बीचतिर, जतनले पटाएको एउटा पाना भेट्टाएँ । पत्र रहेछ । किताबलाई टेबलमा राखेँ र कसको हो ? कसलाई हो ? मलाई नै हो ? यस्तो केही नसोची पढ्न थालेँ-
प्रिय अपरिचित !
सुरुमै माफी माग्न चाहन्छु, त्यो दिनको लागि । मलाई थाहा छ तपाईंलाई आश्चर्य लागिरहेको होला । रिस पनि उठिरहेको होला मदेखि । तर त्यो काम मैले रहरले गरेको हैन । म एक बैंकर हुँ । यो जागिरले काठमाडौँमा टिक्न पुगेको छ । आफ्नो तारिफ आफै गर्यो नठान्नु होला तर म आजसम्म इमान्दार नै छु । त्यहीँ तपाईंसँगको त्यो भेट नै मेरो जिन्दगीको अपवाद बन्यो ।
‘हाउस अफ लिभ्स’ को बारेमा मैले जब एउटा साथीबाट थाहा पाएँ, म मा यो किताब पढ्ने चाहना तीव्र रुपले बढ्यो । पहिला यो एउटा कागजको ढेर बाहेक केही थिएन र पछि यसलाई किताब बनाइएको हो भन्ने सुनेपछि त झन् मलाई यो किताब कहाँबाट ल्याऊ, कता पुगौंँ र पढौंँभएको थियो । तपाईं सोच्दै हुनुहोला, पि.डि.एफमा/इन्टरनेटमा पढ्न सकिन्थ्यो । तर इन्टरनेटमा १/२ अनुच्छेद पढेपछि मेरा आँखाहरू पोल्न थाल्छन् । दुख्न थाल्छन् । म चश्मा लगाउँछु । अब यो बैंकको जागिर पनि मेरो लागि होइन जस्तो लागिरहेको छ । २/३ महिनादेखि म यो जागिर छोड्ने सुरमा छु । तर तपाईंलाई के वास्ता म जे गरेपनि । तपाईंले त मलाई चिन्नु समेत हुन्न । म कस्तो छु, आफ्नै दु:ख पो सुनाउन थालेँ । मलाई यस्तो कहिले भएको थिएन ।
किताबको मोह थियो, अझै छ तर यतिसम्मको चाहत म मा कहाँबाट आयो, म अझै सोचिरहेको छु । यो किताब खोज्न हरेक बिहान/बेलुका, मैले काठमाडौंका हरेक पुस्तक पसल चाहरेँ । बुक स्टोरका हरेक बुकसेल्फहरुमा आँखा पुर्याए तर कतै भेटिनँ । मनमा तडप बढ्दै गयो । कतै नपाएपछि, मैले फेरि त्यही साथीलाई कल गरेँ र ‘त्यो किताब तँसँग छ भने पढ्न दे’, भनेँ । तर उसले ऊसँग नभएको र कसैले लगेर फिर्ता नगरेको कुरा बतायो । एक झ्वाँक ऊसँग रिस उठ्यो । अर्को झ्वाँक त्यो किताब लगेर फिर्ता नगर्नेसँग उठ्यो । तर के गर्ने, कोहीसँग रिसाएर त्यो किताब मेरो हातमा पर्नेवाला थिएन ।
त्यो बेलुका पनि म यसै ‘पाटन बुक हाउस’ तिर पसेर निस्किएको थिएँ । किताब त्यहाँबाट मगाउन लगाएको २ हप्ता भइसकेको थियो तर अझै आएको थिएन । म किताब पढ्न तड्पिरहेको थिएँ । त्यति बेलै तपाईँलाई मैले पाटनको एउटा गल्लीमा फेला पारेँ । त्यो किताबसँग । तपाईँ एउटा केटासँग हिँडिरहनु भएको थियो , किताबकै कुरा गर्दै । सायद ऊ तपाईंको साथी हुनुपर्छ । तर न मलाई तपाईंको वास्ता थियो न तपाईँको साथीको । मलाई त वश तपाईंको हातमा भएको ‘हाउस अफ लिभ्स’ सँग मतलब थियो । मेरा आँखा वश तपाईँको हातमा भएको किताबमा एकोहोरिएका थिए ।
मलाई तपाईंको अघि गएर सोध्न मन थियो, ‘त्यो किताब तपाईंले कहाँबाट ल्याउनु भएको ? कता पाइन्छ ? मलाई दिन सक्नु हुन्छ ?’ तर यो सब गर्ने आँट म मा आएन । वश नजानिँदो पाराले तपाईंहरूलाई पछ्याइरहेँ । त्यति बेलै तपाईंहरू खाजा खाना भनि एउटा क्याफेमा छिर्नु भयो । म पनि तपाईंहरू सँगसँगै भित्र छिरेँ । मलाई याद पनि छैन र वास्ता पनि गरेको थिइनँ, तपाईहरूले के मगाउनु भयो, के खानु भयो । म त त्यो टेबलमा लडिरहेको ‘हाउस अफ लिभ्स’ लाई हेरिरहेको थिएँ, जसरी एउटा कामुक प्रेमी आफ्नी प्रेमिकाका पोटिला स्तनहरूलाई हेर्छ ।
एकछिनपछि तपाईं उठेर वासरुमतिर लाग्नु भयो । तपाईंको साथी पनि बिल तिर्न भनि काउन्टरतिर जानु भयो । टेबलमा ‘हाउस अफ लिभ्स’ एक्लै थियो । यहीँ मौका छोपेर मैले टेबलबाट त्यो किताब उठाएँ । मैले अरू केही सोचिनँ, मेरो दिमागमा सिर्फ यो किताबलाई बोकेर कतै भाग्ने कुरा मात्र घुमिरहेको थियो । थाहा छैन, यत्रो आँट म मा कसरी आयो । अझै पनि म यहीँ कुरालाई लिएर घोरिरहन्छु । क्याफेमा मैले केही अर्डर गरेकै थिइनँ, त्यसैले बिल तिर्न कुरा भएन । म आएको न कसैले ध्यान दियो, न म गएको नै । यसरी म, तपाईंको पुस्तक बोकेर रफुचक्कर भएको थिएँ ।
मलाई थाहा छ तपाईंलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । तपाईंको मनमा प्रश्नहरू छन् । म को हुँ ? र मैले तपाईंको घरको ठेगाना कसरी पत्ता लगाएँ ? अनि हराइसकेको/चोरिसकेको किताब किन फिर्ता आयो ? यी सब कुराहरूलाई तपाईंले बेवास्ता गरिदिए हुन्छ । गर्नु पर्ने हुन्छ । यो जान्ने कोसिस नगर्नु होला । मलाई न खोज्नु होला । मलाई एउटा अज्ञात व्यक्ति सम्झिदिए हुन्छ । म एक रहस्य बन्न चाहन्छु तपाईंको जिन्दगीको र त्यसलाई रहस्य नै छोडिदिनु होला ।
मलाई थाहा छैन , यो पत्रमा यहाँ यो लेख्न कत्तिको उचित होला । तर मैले गरेको त्यो भुललाई अलिकति सुधार्न र पत्रको नियम नबिगार्न भएपनि म यो लेख्न चाहन्छु-
तपाईंको उहीँ किताब चोर
हँ ? म एकछिन त रनभुल्लमा परेँ । आखिर के हो यो ? को हो यो ? त्यो ? मान्छेको कसरी किताबसँग यतिसम्मको लगाव हुनसक्छ ?
म छतको कुर्सीमा थ्याच्च बसेँ । एकछिन त टाउको रन्थनियो ।
फेरि सम्झेँ, १० दिन अघि जब त्यो अमेरिका गएको साथीले, ‘घर आउँदैछु र त्यो तैँले भनेको किताब पनि ल्याइदिँदैछु’, भन्यो । म पनि खुब खुशी भएको थिएँ । तड्पिएको थिएँ । कहिले त्यो किताब आउँछ र त्यसलाई स्पर्श गरुँ , कहिले त्यसलाई पढेर सकाउँ भएको थियो । किताबको पर्खाइमा जलिरहेको थिएँ । आनन्दको तड्पाई थियो त्यो ।
कतै मेरो जिन्दगी पनि मुराकामीका किताब जस्तै त भएन । कतै मेरो त्यो तड्पिएको आत्मा, यो सहरमा त्यही किताब पढ्न गुमनाम भएको त थिएन ? र उसैले मेरो हातको किताब चोरेर, पढेर, फेरि मेरै ठेगानामा पठाएको होस् ! यस्तो हुन सक्दैन र ? म सधैँ, मभित्र सयौँ/हजारौँ आत्माहरू दौडिरहेको महशुस गर्छु । एउटा मान्छेभित्र, एउटा मात्र आत्मा हुन्छ भन्ने पनि त छैन ? मभित्रको कफी पिउने आत्मा र किताब पढ्ने आत्मा एउटै नहुन सक्छ । चुरोट खाने र प्रेम गर्ने आत्मा फरक फरक हुन सक्दैनन् र ?
म झट्ट अनुराग कश्यपको ‘नो स्मोकिङ’ भन्ने फिल्मलाई सम्झन्छु ।
लगतै मैले यो पनि सम्झिन्छु कि, ३ दिन अघि मात्र मैले बैंकको त्यो झुर जागिर छोडेको हुँ ।
हैट, के के सोचिरहेको छु म ! म टाउको झड्कार्छु ।
र फेरि त्यो हातमा भएको किताबलाई एकोहोरो हेर्छु । मलाई यस्तो महशुस हुन्छ कि यो किताबभित्र के के छ, मलाई सबै थाहा छ । यस्तो लाग्छ, यो किताब त मैले भर्खरै पढेर सकाएको हुँ ।
कैदी नम्बर ६६६